Dad careysan oo dab qabadsiiyay Xarunta Hay’adda Bisha Cas ee Baardheere | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dad careysan oo dab qabadsiiyay Xarunta Hay’adda Bisha Cas ee Baardheere
Dad careysan oo dab qabadsiiyay Xarunta Hay’adda Bisha Cas ee Baardheere
Wararka ka imaanaya Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in dad careysan ay maanta dab qabadsiiyeen mid ka mid ah Xarumaha Hay’adda Bisha Cas ku leedahay degmadaasi.
Dabka ayaa baabi’iyay dhammaan qaybaha xarunta dawada ee hay’adaasi ka koobneyd, inkasto dadaalo ay sameeyeen dadka deegaanka qaarkood aanay ku guuleysan inay ka hortaggaan waxyeelada uu dabku gaystay.
Muuqaalo laga soo qaaday xaruntaasi ayaa muujinaya dhismaha xaruntaasi oo guud ahaan bas beelay.
Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya sababta ay dadkaasi u dabka u qabadsiiyeen xaruntii keydka dawada ee Hay’adda Bisha Cas. Wararka qaar ayaana sheegaya in dadkaasi ay ka caroodeen mid ka mida shaqaalaha hay’adda oo shaqada laga eryay.
Taliyaha Booliska ee Degmada Baardheere, Gaashaanle Cabdicasiis Sheekh Xasan ayaa sheegay in falkaasi ay ka dambeeyeen sideed qof, kuwaa oo toddobada ka mida sida uu sheegay ay gacanta ku soo dhigeen, midkii kalena ay ku daba jooggaan.
Masuuliyiinta Hay’adda Bisha Cas ee Gobolka Gedo ayaan weli ka hadlin tallaabada lagu gubay mid ka mida xarumahoodii Degmada Baardheere.
Dhacdadan oo ka careysiiyay dadka deegaanka ayaa noqotay mid loogu hadalhaynta badan yahay degmadaasi.
Previous articleMadaxweyne Macron “Daacish weli waa khatar taagan, yaanan lees dhigan”
Next articleGabdhaha Booliska Haramcad oo tababar loo soo xiray (SAWIRRO)